တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ရောက်ရှိ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ရောက်ရှိ
နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် - ၂
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိ နေစဉ် ကာလအတွင်း အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အပါအဝင် အခြား စစ်ဘက်၊ အရပ်ဘက် အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံမှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားဆွေးနွေးခြင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စက်မှုနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် နေမှုများနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုများတွင် တိုးတက်မြင့်မားလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများအား ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေလျက်ရှိသည့် သင်တန်းကျောင်း များအား လေ့လာခြင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အထင်ကရနေရာများအား သွားရောက်လေ့လာ ခြင်းနှင့် ဗာရာဏသီနှင့် ဂါယာမြို့များရှိ ဗုဒ္ဓဝင်နေရာများသို့ သွားရောက်လေ့လာဖူးမြော် ကြည်ညိုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံမှ ပွနျလညျ ရောကျရှိ
နပွေညျတျော၊ ဩဂုတျ - ၂
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီး ရောကျရှိ နစေဉျ ကာလအတှငျး အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံ ဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ အမြိုးသားလုံခွုံရေးကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အပါအဝငျ အခွား စဈဘကျ၊ အရပျဘကျ အကွီးအကဲမြားနှငျ့ တှဆေုံ့၍ နှဈနိုငျငံဆကျဆံမှု တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေး၊ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအားဆှေးနှေးခွငျး၊ အိန်ဒိယနိုငျငံ၏ စကျမှုနညျးပညာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ နမှေုမြားနှငျ့ ကာကှယျရေးပစ်စညျး ထုတျလုပျမှုမြားတှငျ တိုးတကျမွငျ့မားလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေားအား ကွညျ့ရှုလလေ့ာခွငျး၊ ကာကှယျရေးကဏ်ဍတှငျ လကေ့ငျြ့ဆောငျရှကျပေးနလေကျြရှိသညျ့ သငျတနျးကြောငျး မြားအား လလေ့ာခွငျး၊ အိန်ဒိယနိုငျငံ၏ အထငျကရနရောမြားအား သှားရောကျလလေ့ာ ခွငျးနှငျ့ ဗာရာဏသီနှငျ့ ဂါယာမွို့မြားရှိ ဗုဒ်ဓဝငျနရောမြားသို့ သှားရောကျလလေ့ာဖူးမွျော ကွညျညိုခွငျးမြား ဆောငျရှကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။